Wararka - Hoggaamiyeyaasha Kooxda Yiwu Mall Group waxay booqdaan shirkadda Mr.huolang
Bishii Abriil 19th, Zhao Wenge, maareeyaha guud ee Yiwu Mall Group, Zheng Xiangjun, maareeyaha guud ee Yiwu International Expo Center, iyo Liu Zhenting, maareeyaha guud ee laanta shanaad ee Yiwu International Trade City, ayaa booqday Yiwu Mr.huolang Trading Co., Ltd.
Zhou Jianqiao, oo ah guddoomiyaha Yiwu Mr.huolang Trading Co., Ltd, ayaa soo bandhigay dhammaan alaabooyinka hoolka bandhigga.
Maareeyaha Guud Zhao Wenge wuxuu dhegeystay hordhaca faahfaahsan ee qaabka ganacsiga Mr. Zhou Jianqiao oo dhan, iibinta dukaanka, iyo yoolalka horumarinta mustaqbalka. Guddoomiye Zhou Jianqiao ayaa soo bandhigay: “Tan iyo markii la aasaasay shirkadda Mr.huolang, waxaan si qoto dheer u dhexgalnay silsiladda sahayda, taasoo naga dhigtay inaan helno faa'iidooyin muhiim ah noocyada, tayada, iyo qiimaha badeecadaha. Isla mar ahaantaana, waxaan si joogto ah u sahaminaynay hal -abuurka boosteejooyinka dukaamada tafaariiqda dhawrkii sano ee la soo dhaafay; waxaa sidoo kale si weyn u aqoonsaday shirkadaha asaagga ah iyo kuwa tafaariiqda leh. Nasiib wanaag, waxaa la guddoonsiiyay “Tobanka Kobcin ee Kobcinta Ganacsiga ee Warshadaha Tafaariiqda ee Shiinaha” oo uu bixiyey Xiriirka Ganacsiga Shiinaha. Bishii Maarj 2017, waxaa lagu sharfay “Qiimaynta Dhibcaha Ganacsiga Ganacsiga ee AAA Enterprise AAA.”
Dhinaca kale, Mr. huolang wuxuu sameeyay hal -abuurnimo mar labaad isagoo ku salaynaya is -dhexgalka silsiladda sahayda - sida maareynta alaabada oo aad u fiican. Mr. huolang wuxuu xooga saaraa qaybo badan oo hoose. Waxaa jira in ka badan 35,000 nooc oo alaab ah.
Dhinaca kale, Mr. huolang wuxuu leeyahay nidaam maamul oo adag oo loogu talagalay naqshadeynta badeecadaha iyo xirmada. Mr. huolang wuxuu aasaasay waaxda naqshadeynta xirfadeed wuxuuna sameeyay xarumo R&D iyo xarumo xog. Iyada oo loo marayo jawaab celinta xogta bakhaarka, oo ay weheliso walxaha moodada, Mr. huolang wuxuu aad uga shaqeeyay naqshadeynta badeecada iyo baakadaha.
Maareeyaha Guud Zhao Wenge ayaa sidoo kale lagu booqday bakhaarka Mr.huolang. Waxay mahadnaq u jeediyeen maamulka ganacsiga iyo istaraatiijiyadda horumarinta Mr. Lang. Zhao Wenge wuxuu yiri: Waxaan rajaynayaa in Mr.huolang uu sii ahaan doono mid sii weynaada oo xoog leh, kaliya ma aha inuu noqdo sumcad caan ku ah Yiwu ee wuxuu kaloo noqon karaa summad caalami ah oo caan ah. Isla mar ahaantaana, waxaan rajaynayaa in iyada oo loo marayo moodalka tafaariiqda dukaanka waaxda Mr. Lang, isku -darka iyo wadista summadaha bakhaarka waaxda maxalliga ah ee Yiwu, oo u keeno Dukaanka Waaxda Yiwu waddanka oo dhan iyo adduunka oo dhan.
Waqtiga dhejinta: Jul-07-2021